Ahịa ngosipụta azụmahịa zuru ụwa ọnụ ga-eru US $ 7.6 ijeri na 2025
Na 2020, ahịa ngosi azụmahịa zuru ụwa ọnụ ruru ijeri US $ 4.3 ma na-atụ anya iru US $ 7.6 ijeri na 2025. N'ime oge amụma, a na-atụ anya na ọ ga-eto eto na mmụba kwa afọ nke 12.1%. Ngosipụta ahụike nwere mmụba dị elu na-eto eto kwa afọ n'oge amụma ...
Nke a bụ Anwansi Anwansi—- Fitness Smart Mirror
Traditional mma ụlọ ọrụ agbanweela nke ukwuu. Fitnessdị mma ezinụlọ abụrụla omume ndị mmadụ na-agbaso ụdị ndụ ibi ndụ ahụike n'oge oge ntiwapụ ọrịa. Egwu nke usoro ahụ agbanweela site na ntanetị gaa n'ịntanetị. Imega ahụ ọ̀ pụrụ imezu ebumnobi nke ịdị mma sayensị? Ọ bụrụ na naanị chọrọ ...
Etu esi akwalite azụmaahịa ụlọ ọrụ site na ọkpụkpọ mgbasa ozi Elevator
Etu ị ga - esi kwalite azụmaahịa ụlọ ọrụ site na ọkpụkpọ mgbasa ozi nke Elevator Community Elevator mgbasa ozi ọkpụkpọ bụkwa mmalite ọzọ nke mgbasa ozi na mpụga ụlọ ahụ. Ihe omuma ihe omuma nke ulo oru mgbasa ozi nke ulo oru bu ihe omuma banyere ihe omuma nke obula na ulo obula ...
G ISN IS B A Onye Na-achọpụta Nchọpụta Ihu Igwe Igwe Igwe?
G ISN IS B A Onye Na-achọpụta Nchọpụta Ihu Igwe Igwe Igwe? N'oge mgbasa COVID-19, kiosks na-ahụ maka ihu igwe dị mma na-enyere ụlọ ọrụ aka ịchekwa ọnọdụ mmepe. Kedu ihe bụ Igwe nyocha ihu igwe na-acha ọkụ ọkụ KIOSK? Ọ nwere ike ịkwụsị mgbasa nke ọrịa na-efe efe? Kedu ubi nwere ike ...
Copyright - 2010-2021: All Rights echekwabara. Featured ngwaahịa, Sitemap, Mgbasa Ozi Digital, Standalone Digital Akara, Digital Signage Standee, Ngosipụta nke Digital, Interactive Touch Screen Kiosk, Wall Mounted Digital Signage, Ngwaahịa niile